ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! ग्राहकको घुइचो Archives -
Homeह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! ग्राहकको घुइचो
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! ग्राहकको घुइचो
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! यस्तो छ आजको भाउ
November 11, 2018 Spnews 0
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘पहेँलो धातु’को भाउ घटेकाले तथा डलरभन्दा भारतीय रुपैयाँ मजबुत भएकाले नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा रु एक हजारले घटेको छ। आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला रु ५९ हजार र तेजाबी सुन प्रतितोला रु ५८ […]
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, कति छ आजको मूल्य ?
May 16, 2018 Spnews 0
काठमाडौँ : बुधबार सुनको मुल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँ घटेको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबार ५९ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य बुधबार ५८ हजार ७०० रुपैयाँमा झरेको हो । […]
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, थाहा पाउनुहोस् आजको भाउ
March 30, 2018 Spnews 0
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन सुन तोलाम५७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो हप्ताको पहिलो दिन आइतबार तोलाको ५८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बुधबार […]
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुस आजको भाउ
December 16, 2017 Spnews 0
काठमाडौं । विहिवार तोलामा ४०० रुपैँयाले बढेको सुनको भाउ शनिबार आज घटेको छ । आज सुनको भाउ तोलामै २०० रुपैँयाले घटेको हो । त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि ५ रुपैँयाले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी […]
December 10, 2017 Spnews 0
काठमाण्डौ । सुनको भाउ पछिल्लो चार महिनाकै सस्तो भएको छ ।एकै दिनमा प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँले घट्दै शुक्रबार ५४ हजार पाँच सय रुपैयाँ कारोबार भएको छ । बिहीबार ५५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार […]
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुस आजको मूल्य
November 30, 2017 Spnews 0
काठमाडौं : सुनचाँदीको भाउ बिहीबार घटेको छ । बिहिबार सुनको भाउ तोलामा ३ सय तथा चाँदी १० रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बिहीबार तोलाको ५५ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको […]
October 3, 2017 Spnews 0
काठमाडौं, १७ असोज । सुनको भाउ मंगलबार तोलामा एक हजार रुपैँया घटेको छ । दसैँपछि बजार खुलेको पहिलो दिन मंगलबार नै सुन भाउ यसरि ओरालो लागेको हो । मंगलबार आज एकाएक तोलाको ५६ हजार रुपैयाँमा झरेको […]